Esinye sezifo eziyingozi kakhulu ibhekwa njengezwekazi ngamarabi. Akukona nje ukuthi lesi sifo esibulalayo uma abantu uyithola ezilwaneni, kodwa futhi iqiniso lokuthi esilwaneni kuyinto ngempela obukwazi ukulimala aluhambisani nawo ekuphileni, uma ehlaselwa.
Kuncike kule isifo cishe zonke izidalwa esinegazi elifudumele, kodwa ingozi enkulu ukuba abantu izinja ezinalesisifo, njengoba lezi zilwane manje zitholakala ngamanani amakhulu emhlabeni abantu njalo mbeni kubo.
Ngaphambi wokuqonda indlela yokubona amarabi izinja, kubalulekile ukuqonda ukuthi ukutheleleka kwenzeka yilesi sifo esesabekayo. Zonke izilwane ezinegazi elifudumele, kuhlanganise nabantu, itheleleke ezinamarabi ngokufanayo - ngokusebenzisa lomzimba (isib, amathe noma igazi). Indlela ejwayelekile kakhulu - bite i nesineke isilwane noma ukuthola ekuqaleni ku amathe akhe. Kulokhu leli gciwane ngamathe of othwala isifo engena igazi endaweni bite.
Ngaphezu kwalokho, inja ungadla, isibonelo, igundane ogulayo - futhi ungenwe. Ephambi kwezinduna Izilonda ongabonakali kwezilwane ezinegciwane umane khotha iyindawo ukuba adlulisele igciwane.
Kubalulekile ukwazi ukuthi yini izimpawu zamarabi izinja: ukuziphatha izinguquko wesilwane, kuba eziyinqaba okungalungile, iqala salivating. Nokho, lezi zimpawu ayisibonelo esigabeni oyingozi kakhulu lesi sifo, kanti esilwaneni kuba yingozi ngisemncane kakhulu.
Njenganoma iyiphi enye isifo, ukugula ine isikhathi bayashintshana ekufukameleni, ngemva oludlula izigaba eziningana amarabi izinja. Ngokuvamile izimpawu zokuqala kungenzeka esabelweni sokuqala isifo.
Isikhathi bayashintshana ekufukameleni
Isikhathi bayashintshana ekufukameleni iyingozi kakhulu ngoba akusiyo ngokucacile izimpawu ebonakalayo. Inja luziphatha ngokufanele, akukho iziyaluyalu ubuthongo futhi esesuthi, basalelwe umsebenzi ajwayelekile. Phakathi naleso sikhathi, igciwane - agent causative lesi sifo (okuthiwa rhabdovirus) isivele isiqalile hambisa yayo ekhanda zobuchopho inja. Ngokushesha nje lapho kufinyelela umgomo wakhe - lesi sifo babonakalise. Lesi sinyathelo ngokuvamile Uthatha kwezinsuku 14 kuya ku-60.
Phakathi nale nkathi, ngokokuqala ngqa, ungakwazi ukunquma ukuthi inja ngamarabi. Animal iqala osebenza up, ngokuvamile kungazelelwe kwemizwa - ngaphandle kwesizathu, ludlulele uchuku bengamnaki, kusukela nokunganaki nobungane ukudlala. Khona-ke kukhona ngamaphupho nje la. Inja singazelele ambhokele kwi isitha non-akukho, zikhonkotha ngaphandle kwesizathu, noma umba phansi lapho akusiyo. Ngesikhathi esifanayo angase aqale ukusingatha sibonakalise ukungabekezelelani ukuba ukukhanya okukhulu - kokubili elanga futhi yokufakelwa. Lesi sigaba kuyinto esikhathi esifushane, kuvame ukuthatha ayisekho kwezinsuku ezimbalwa (ngokuvamile kungagcini amahora ambalwa).
Lona isigaba esiyingozi kakhulu. Kwakuthinta ngalesi sikhathi is ikakhulukazi liphinyiselwe angakwazi ngenja. Indlela ukwazi izimpawu zokugula? Esikhathini inja walahlekelwa babenakho ukwesaba ukusangana ngomqondo ofanele izwi ukushayela bathi usangene. Isilwane asikwazi ukugwinya amathe, ngakho-ke ugelezela ngobuningi ebusweni. inja Husky Barks noma howls drawl.
Kulesi sigaba, ke ayisekho ibona abantu ajwayelekile, abafaka umnikazi. Animal kwi leash izozama ukubaleka uma uphumelela - eziyosebenza, phansi Dale, futhi ukuhlasela yini ukuthi uzohlangana. Kungazelelwe zifike iziqubu zokuba nokunganaki - inja ngesikhathi esifanayo ilahlekelwa yonke inzalo emhlabeni, akukho ekuphenduleni umyalo, isilwane angadli noma udle.
Lena inkathi okokugcina, njalo uphela ekufeni besikhumba saleso silwane. ubude besikhathi - amahora 96. Phakathi nale nkathi, ukukhubazeka eqhubekayo kancane kancane yehla kusuka ekhanda laso silwane aphansi. Phakathi nale nkathi senja neNkabazwe, kancane kancane ilahlekelwa ukuhamba futhi lufe.
Kufanele wazi ukuthi ukunquma ukuthi inja iyagula ezinamarabi. Kuhle kakhulu ukwenza lokhu uma nisanda - ngowokuqala noma wesibili, lapho isilwane kuphephile ngoba umninikhaya, ngoba usasikhumbula futhi ongakabi yingqondo kwakhe nomuzwa wokwesaba. Kamuva senja ngokulinganayo yingozi kuwo wonke umuntu, ngisho umnikazi we kuyingozi ukwedlula esingabazi. Lokhu kungenxa yokuthi umnikazi ngokuvamile kunzima ukuqonda ukuthi yini isilwane ajwayelekile, cishe ilungu umngane nomndeni, njengoba usongo ekuphileni.
Indlela yokubona ngamarabi ngemuva kokuba yinja
Uma isilwane engakaze zigonywe, amathuba kokuba utheleleke nge zasendle likhulu kakhulu. Lokhu kungenzeka kokubili contact futhi umphumela bite. Kufanele ziqashwe ukuze isilwane, wazi ukuthi ukukhomba ngamarabi. Esikhathini inja, kungase kuqale nge izimpawu ezicashile, ngakho-ke kubalulekile ngokucophelela. Isikhathi esigabeni sokuqala kakhulu - izinsuku 2-10. Ngalezo zinsuku, isilwane uyobheka ukucabanga ngakho, okuyinto kuhambisana izimpawu ezithile. Lapho igama elilodwa noma ngaphezulu kubo kumele kuhlolwe ku search amanxeba isilwane noma imihuzuko. Uma lokho kulimala kutholakala, kufanele ngokushesha afune usizo lwezokwelapha. Symptomatology esigabeni sokuqala:
ukuhlanza noma isifo sohudo;
ukulahlekelwa ikhono ukugwinya.
Kubalulekile ungalahlekelwa noma yiziphi izimpawu e ngezikhathi ezithile ukubona onguchwepheshe.
Lokubaluleke kakhulu akukhona kuphela ulwazi lokho inja has amarabi, uwuchaza kanjani it. Kubalulekile futhi ukwazi ngezindlela ekuvimbeleni ke.
Yinye kuphela indlela ukuvimbela inja ngamarabi - ngokugoma. umgomo ababhekene nesimo esinje kungabaduduza wafaka cishe noma yikuphi nomtholampilo wezilwane. Ngesikhathi yokugoma isilwane kumelwe baqiniseke okukhulu. okufakile elihambisana ekhombisa umgomo ayokwenziwa passport:
Kwamasonto angaba mabili phambi okuhleliwe lokugoma isilwane ukukhipha izikelemu kuyadingeka ukuze sifeze inqubo. Kutfutfukiswa amasosha omzimba ziphikelele isilwane kuthatha amaviki amathathu emva yokugoma.
Njenganoma iyiphi wokugoma, lapho amarabi bangezwa imiphumela engemihle akufanele okwesabisa noma kuwamangaze umnikazi wesilwane. Lezi zihlanganisa:
Yokungezwani komzimba. Kungase kwenzeke phakathi nemizuzu yokuqala nanhlanu. Ngalesi sikhathi, isilwane kumele kube emtholampilo. Lapho ukubonakaliswa izimpawu yokungezwani komzimba wezilwane kufanele uthole shot we antihistamine.
amathe ngokweqile nokuvuvukala.
Ukukhungatheka ngezinsimbi zesihlalo.
Amaqhubu kusayithi umjovo.
Uma isilwane asebengenwe igciwane ngesikhathi yokugoma, umgomo ukuphuthumisa okubonakalisa isifo nokufa inja. Ukugonywa akukuvikeli ngokuphelele ngokumelene sifo. Kukhona ithuba ukubamba namasonto amathathu okuqala ngemva yokugoma - ngesikhathi lapho isimiso somzimba sokuzivikela. Kodwa ngisho ngemuva kokuphela kwalesi sikhathi, kunethuba, siqala elincane kakhulu, ezingase isilwane itheleleke.
Imvamisa of yokugoma zingahluka. Uma inja noma unogada zokuhlobisa - luyoba olwanele ukuphinda lokugoma njalo eminyakeni emibili. Ukuze ukuzingela dogs saziso yokugoma yonyaka.
Abanikazi ngokwanele ukwazi ukuthi inja has amarabi, uwuchaza kanjani it. Ngesikhathi esifanayo ngaba nokuzethemba ukuphepha isilwane sakho, kufanele ukunciphisa contact yayo kanye nezilwane abangenamakhaya ehlangeni.
Njengoba kushiwo ngenhla, ngamarabi - isifo esibulalayo okungukuthi ezingase zivinjelwe, kodwa engelapheki. Imizamo aphathe noma esilwaneni akuvunyelwe nakancane, njengoba is phansi abasebenzi esibhedlela ngokuyinhloko wezilwane kubafake engozini enkulu.
Uma inja sitholakale ngamarabi - ke wabeka nokulala. Ngakho, lesi silwane ngeke sinciphise ukuhlupheka kwabanye futhi ukuthathelwa umshuwalense ngokumelene ingozi yokutheleleka.
Esinye sezifo wayemesaba kakhulu ezifuywayo - a amarabi inja. Indlela ukunquma umsuka waso nokwanda ukuvimbela ukutheleleka, bonke abantu kufanele bazi umnikazi.
Hen Wyandotte: incazelo (izithombe)
Indlela ukunciphisa izimpiko ikati sika kwesokudla?
Anatomy ezifuywayo: izingono ikati sika njengoba
CBR format. Wena uvule ifayela
Amandla of emkhakheni kagesi
Izimpophoma, Arkhipo-Osipovka: incazelo
Amafutha "Impande": kuzibuyekezo, izintengo. Amafutha "Impande" inkampani "impilo laseSiberia"